Akụkọ kacha ọhụrụ banyere FC IfeanyiUbah si Nigeria & ụwa | TAA
Akuko: Akwa Ibom gọọmentị akara ọrụ nchịkwa nke Buhari maka mkpọmkpọ ebe
Prince Harry jụrụ nwa nwanne William ka ọ bụrụ ezigbo mmadụ
2019: Na Korea, ex-Gọvanọ Kalu kpụrụ ndị Naijiria maka President Buhari
Gọọmenti ime mmụọ ndị India na-eji ndụ ha eme ihe
SEC kwadoro ihe nde dollar 500 nke mbido n'ihu ọha na-enye
CBN: Ụlọ akụ na-elekọta 500,000 ga-eguzobe n'ime ime obodo
Hyundai Motor mbụ nkeji iri na ise net uru slumps 48%
Deutsche Bank gbasiri ike iji merie uru bara uru
US rapper J. Cole bịarutere Nigeria maka egwu egwu mbụ
Onye na-eche nche nke Israel bụ Akpan Udoh sonyere Flying Eagles
World cup: M dị njikere Iji na-alụ ọgụ maka ebe Super Eagles ...
Joseph Osadiaye: Enyimba dị njikere ịlụ ọgụ maka aha NPFL
'Farcenal', ndị Britain na-eme mkparị banyere Arsenal, Arsene Wenger n 'ọpụpụ njikwa
Home Tags FC IfeanyiUbah
Flying Eagles na-atụgharị obi na mmeri na Guinea Bissau
Nigeria U20s, Flying Eagles, ekwela nkwa na ha agaghi adapu ule Guinea Bissau n'ikike U20 AFCON nke ozo.
Ndị isi NPFL bụ Lobi Stars na-aga ebe isii
Lobi Stars wezugara ha ndu nke NPFL mgbe ha kpochapụrụ Pillars 1-0 site n'aka onye midfielder Ayo Saka taa.
Ladan Bosso nwere olile anya ịlaghachi FC Ifeanyiubah na Afrika
Onye nchịkwa FC Ifeanyiubah Ladan Bosso kwughachiri mkpebi ya ime ka ụlọ ọrụ ahụ laghachi na Afrika.
FC Ifeanyiubah na-alụ ọgụ iji tie Sun Stars 3-1 egwu
FC Ifeanyiubah si na ihe mgbaru ọsọ biaghachi iji merie Sunshine Stars 3-1 na otu egwuregwu 16 nke NPFL.
Ndị ọrụ agha Lobi Stars pip El Kanemi na-anọ n'elu NPFL
Lobi Stars wezugara ebe kachasị elu ha na NPFL mgbe ha batara na El Kanemi Ndị dike 1-0, ebe enwere ụlọ obibi maka Katsina United, Fc Ifeanyiubah, Niger Tornadoes na Yobe Desert Warriors.
Junior Lokosa na-eleta ihe mgbaru ọsọ 14th dị ka Kano Pillars nke na-akụda FC Ifeanyiubah
Junior Lokosa kpochapụrụ ihe mgbaru ọsọ 14th nke oge dịka Kano Pillars trounced FC Ifeanyiubah 4-0 na n'ihu NPFL taa.
Ladan Bosso: Igodo nke isi na FC Ifeanyiubah nwere ihe ịga nke ọma na NPFL
FC Ifeanyiubah onyeisi nchịkwa Ladan Bosso chọrọ Yaya Kone na ndị egwuregwu ya ịnọgide na-anọgide na-agbanwe agbanwe n'oge niile.
Heartland na-ekwu okwu na-arụ ọrụ ndị Turkey onye nchịkwa
NPFL n'akụkụ Heartland kwadoro na ha na ndị na-akpọ Turkish club maka ọrụ nke onye na-ahụ maka ndị njem.
NPFL n'elu scorer na-elekwasị anya na isiokwu aha ya na Ogidi Kano
Junior Lokosa, nke ugbu a bụ 2017 / 2018 Nigeria Professional Football League (NPFL) na-eduzi onye nchịkọta, kwuru na ọ na-elekwasị anya na ọ ga-ebulite asọmpi egwuregwu na ụlọ ọrụ Kano Pillars FC.
Onye isi na Plateau United nchịkwa Boboye ezughị oke iji chefuo 3-0 na FC Ifeanyiubah
Onye nchịkwa Plateau United Kennedy Boboye agbagoro nkwenye na a ga-akwụsịtụrụ onye ọfụgharịa Awalu Rabiu site na Zamfara mgbe ọ na-eduzi otu egwuregwu egwuregwu nke otu òtù 3-0 na FC Ifeanyiubah kwụsịrị.
LMC kwụsịtụ ndị NPFL maka ndị ogbenye na-elekọta
Ụlọ ọrụ Njikọ Njikọ (LMC) akwadoro nkwusioru nke ụfọdụ ndị isi egwuregwu nke na-eji ụbọchị ise nke 14 eme ihe iji mee ka ndị ọzọ na-ahụ maka egwuregwu na Nigeria Professional Football League ruo mgbe ha nyochachara ọrụ ha.
Kennedy Boboye: FC IfeanyiUbah adịghị mma karịa Plateau United
Onye nchịkwa Plateau United Kennedy Boboye kwenyere na FC Ifeanyiubah agaghị enwe ihe ịga nke ọma na-acha ọcha ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka onye ọhụụ nke Yaya Kone, bụ onye jiri aka ya kụda ụmụ nwoke udo n'ụbọchị Sunday.
Ike Shorunmu: Nsogbu na Poland, ọ bụghị Super Eagles
Onye na-eche nche Nigeria bụ Ike Shorunmu ka na-elekọta Super Eagles agaghị adị n'okpuru ụdị nrụgide na-abata enyi na enyi Poland taa.
Ocheme Edoh: El Kanemi Warriors laghachi na track
Onye na-ekpuchi ihe mgbaru ọsọ naanị maka El Kanemi ndị dike Sunday megide FC Ifeanyiubah, Ocheme Edoh, kwuru na ndị otu ya ejirila elu gọọmentị na-eso obere mmalite nke oge.
Ladan Bosso flays 'wasteful' FC Ifeanyiubah
Onye nchịkwa FC Ifeanyiubah Ladan Bosso kwuru na 'Anambra Warriors' bụ ihe na-abaghị uru ma na-enwe obi ike site na nchịkwa na mmeri 1-0 na El-Kanemi Warriors na ụbọchị 13 nke 2017 / 2018 NPFL.
Jọshụa Obaje na-eleba anya na CAF Confed Cup mgbe Plateau United rutere Njikọ pụọ
Plateau United kwadoro Jọshụa Obaje na-ekwu na akụkụ ahụ ga-alụ ọgụ ike iji merie CAF Confederation Cup mgbe ha si na CAF Champions League pụta n'aka Etoile du Sahel na Sunday.
FC Ifeanyiubah kwenyere ịlaghachi azụ-pụọ Olamilekan Adeleye
Nigeria Football League FC FC Ifeanyiubah ejiriwo amara nakweere mgbaghara Olamilekan Adeleye ma gbaa ya ume ka ọ ghara ime mmehie ọzọ.
Ndị na-akwado Kwara United na-achọ ka ụlọ ọrụ na-ahụ maka ndị ọrụ ụgbọ mmiri John Obuh
Ngalaba ndi ozo di na Kwara na Wednesday na Ilorin gbara ndi oru Kwara United Football Club nke Ilorin ume ka ha nyocha ndi oru ugbo ogugu.
1234Page 1 nke 4
Ndi oru ochichi nke ala ka ndi oru ochichi nke ochichi obodo Muhammadu Buhari choputara.
Onye Britain Prince Harry jụrụ nwanne ya nwoke bụ William William ka ọ bụrụ nwoke kachasị mma mgbe ọ lụrụ di na nwunye America bụ Meghan Markle na-esote ọnwa, Kensington Palace kwupụtara Thursday.
Onye na-eche nche nke Israel, bụ Akpan Udoh, abanyela n'ogige ọzụzụ ọzụzụ Flying Eagles na Abuja n'ihu nchịkwa 2019 U20 AFCON nke na-abịanụ ruo Guinea Bissau.
Egwuregwu World: Adị m njikere Ịlụ ọgụ maka ebe ndị Super Eagles - Chidozie Awaziem
Chidezie na-akwado Chidozie Awaziem, ekwenyela na asọmpi maka ebe ndị Super Eagles maka 2018 FIFA World cup na Russia ga-esi ike, ma na-enwe obi ike na-eme ikpeazụ ebipụ.
Onye isi gọọmenti nke Abia State, Dr. Orji Kalu, agbaala ndị Niger nọ n'ógbè ahụ ume ka ha kwado ọchịchị nke President Muhammadu Buhari iji wulite mba nwere ọganihu.
Ndị gọọmenti n'okpuru nzukọ ndị gọọmentị Naijiria zutere Wednesday n'abalị na Abuja maka nkwụsị ikpeazụ nke nkwụghachi ụgwọ Paris.
Ụlọikpe na-agba mmadụ ebubo nke N10.1m wayo
Ụlọikpe Kasị Elu nke FCT, Apo, na Monday gbaghaara otu Mbụ bụ Eze, ebubo nke aghụghọ N 10.1.
Ndị uweojii na-ahụ maka Senator Dino Melaye
Onye isi oche, Kọmitii Senate na Federal Capital Territory, FCT, Senator Dino Melaye, APC, Kogi West, ejidewo ndị ọrụ nke Special Anti Robbery Squad, SARS.
Ander Herrera: Manchester United na-achọ inweta akara, na-egwu egwu
Onye omekorita Andre Herrera mere ka otu onye na-agba agba na Manchester United 2-1 FA merie Tottenham, na-ekwu na akụkụ Jose Mourinho na-aghọzi ndị na-asọ asọ maka asọpụrụ.
Chief Justice Onnoghen: Ndị ikpe adịghị mkpa ka ha bụrụ otu
Nnukwu ikpe ikpe nke Nigeria, ikpe ziri ezi Walter Onnoghen, na Wednesday jụrụ nkwado maka nhazi nke otu ndị ikpe Naijiria.